रौतहट, ७ पुस । मनदेखि नै सहयोगी भावना भए सहयोगी हातहरु धेरै हुने रहेछन् भन्ने लोकोक्ति रौतहटका एक रिक्सा चालकले गरेर देखाएका छन् । वर्षौंदेखि रौतहट जिल्लाको चन्दपुर नगरपालिकामा रिक्सा चलाउँदै आएका केदारप्रसाद तिमलसिनाले...
क्रिसमस मनाउन तीन सभासद हेलिकप्टर चढेर सररर…….
धादिङ, ७ पुस । उत्तरी धादिङको विकट क्षेत्र री गाविस ४ मा क्रिसमस मनाउने कार्यक्रममा सहभागी हुन धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का तीनवटै सांसद हेलिकप्टर चार्टर गरेर पुगेका छन्। चोके गाउँस्थित हिमालय प्राथमिक...
निःशुल्क भनेपछि क्यामरासमेत नछाड्ने अध्यक्ष दाहाल, छ वर्षपछि फिर्ता
काठमाडौं, ७ पुस । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री भएका बेला कार्यालय प्रयोजनका लागि लगिएको क्यामेरा, लेन्सलगायतका सामान फिर्ता भएको भवन निर्माण सम्भार तथा डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। यी समान लगेको ६ वर्षपछि २०७१...
पूर्वयुवराज पारस शाह डेढ महिनादेखि थाइ कारागारमा
काठमाडौं, ७ पुस । अबैध लागूऔषध सेवनका कारण थाइल्याण्डमा पटक पटक पक्राउ परेका पूर्वयुवराज पारस शाह डेढ महिनादेखि थाइ कारागारमा बस्न बाध्य भएका छन् । उनी गत कात्तिक महिनाको अन्तिम सातादेखि थाइल्याण्डको रुङखाइस्थित कारागारमा...
कम्तिका छैनन् कांग्रेस र एमालेका नेताहरू पनि
काठमाडौं, ७ पुस । कांग्रेस र एमालेले निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको साटो संविधानसभाभित्रै सभासदहरुको बेग्लै संयन्त्र बनाई फास्ट ट्रयाकमा मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । एमाओवादी...
मोर्चा बन्दी नगरौँभन्दा बम्किएर हिँड्ने ! प्रचण्डजी आफै बुरुक्क उफ्रर हिड्नुभयो
काठमाडौं, ७ पुस । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमाओवादीलगायतका केही दल संविधान नबनाउने र बन्न पनि नदिने ढंगले प्रस्तुत भइरहेको दाबी गर्दै अब दुई तिहाईभन्दा बढी मतले संविधान जारी गर्ने दाबी गरे । सहमतिका...
विदेशी पैसा पचाउने नाममा गैर सरकारी संस्थाको गैर जिम्मेवारी काम, यौनजन्य एसएमएसले आतंक
काठमाडौं, ७ पुस । ‘तेर दे जोम फाउण्डेसन लोनाज (टिडिएच)’ नामक संस्थाले खुलेआम’ यौन व्यवसायु सम्बन्धी एसएमएस पठाएर उपत्यकाबासीलाई भ्रममा पार्ने र त्रास फैलाउने काम गरेको छ । यौन शोषणमा परेका बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने...
सुरेन्द्र ठाकुरको परिवारनै चोरीमा संलग्न
काठमाडौं, ६ पुस । नयाँ बानेश्वरको मिलन चोकनजिकै भद्रमार्गमा एउटा पूरानो दुइतले घर छ। तारा खड्काको यो घर तीन वर्षदेखि रौतहटका सुरेन्द्र ठाकुरले भाडामा लिएका छन्। उनको परिवार नै चोरीमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले...
भारत जाँदा सिमानामा समस्या भए फोन हटलाइन
काठमाडौं, ६ पुस । नेपालको लक्षिणी सीमावर्ती इलाकामा ओहोर-दोहोर गर्द दुर्व्यवहारलगायतका कुनै पनि समस्या भएमा सहज होस् भन्ने उद्धेश्यले नेपाल भारत दुबै मुलुकले हटलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यसैबीच सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले...
राहदानी भर्दा विग्रिए एसएमएसबाट जानकारी आउने
काठमाडौं, ६ पुस । तपाईँको मोबाइलमा ६००१ नम्बरबाट एसएमएस आएको छ, आएको भए राम्रोसँग पढेर मात्र डिलिट गर्नुहोला। किनकि, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहदानी विभागले तपाईँलाई जरूरी सूचना पठाएको हुनसक्छ । राहदानी विभागले यसैसातादेखि राहदानीका लागि...
२२ दलीय मोर्चा विघठनको मागले विथोलिएको हो शीर्ष बैठक
काठमाडौं, ६ पुस । संविधानका मुख्य विवादित बिषय शासकीय स्वरुप र संघियतामा निर्णायक छलफल गर्न शनिबार बसेको तीन दलको बैठक चर्काचर्कीपछि स्थगित भएको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूबीच चर्काचर्की...
शेयर माग्ने स्थानीय ‘गुण्डा’लाई तह लगाउन निर्देशन
काठमाडौं, ६ पुस । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सिन्धुपाल्चोकका निर्माणाधीन चारसहित पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता तथा गुण्डाले लामो समयदेखि गरिरहेको अवरोध तत्काल खुलाउन गृह र ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्...
« 1 … 1,168 1,169 1,170 1,171 1,172 … 1,280 »